Inona avy ireo ba kiraro tsara indrindra amin'ny bisikileta? - Bisikileta
Tena > Bisikileta > Ba kiraro fitondra bisikileta mangatsiaka - Boky Torolàlana feno
Ba kiraro fitondra bisikileta mangatsiaka - Boky Torolàlana feno
Inona avy ireo ba kiraro tsara indrindra amin'ny bisikileta?
Ny 9Paosy baomba tsara indrindraho an'ny fahavaratra #SockDoping
Modely maro. SockGuy Lucky 13. sockguy.com. $ 10.95.
Tsara indrindraSarobidy Tommaso 3-Pack. amazon.com. $ 14.99.
Mazava sy maharitra. Defeet Aireator 6 'Rooster. resy.com. $ 14.99.
Orinasa mainty. Memory Pilot Wattstyle. memorypilot.com.
Mampiaiky. Swiftwick Aspire Seven. swiftwick.com.
30 jol. Feb 2020
Ny bokim-pitsarana UCI. Ahoana ny fomba itiavantsika rehetra mamaky azy fotsiny ary manipy azy. Misy fitsipika iray vao natomboka tato ho ato ary momba ny halavan'ny sock izany, andao hanontaniantsika ny mpitaingina ny hevitr'izy ireo momba izany ary koa ny mety ho halavan'ny soja mety indrindra. (Mozika Techno) - (mihomehy) Triathletes, mitandrema. - (mihomehy) (Hiss air) Lehilahy mahay ianao, tsy maintsy lazaiko ny halavan'ny ba kiraro. (mihomehy) Inona ny halavan'ny sock tonga lafatra? - Ankehitriny dia mipetraka ny fanontaniana momba ny overshoe, satria ny overshoe koa dia eo indray eo amin'ny lalana, fa eny, amin'ny fetra foana.
Noho izany, ny tendrony lehibe dia ny mametaka marika eo amin'ny tongotrao ambonin'ilay faritra alfa amin'ny tongotrao ary eny, atositosiho hatramin'ny farany ny ba kiraronao - angamba tombokavatsa eo amin'ny tongotrao? - angamba tatoazy, fa tsy azoko antoka hoe mahafinaritra be izany, raiso ny tatoazy. (mihomehy) - Mpankafy olona ve ianao izay toa ny triathletes na mpilalao baolina amin'ny bisikileta na tsia? - (mihomehy) Triathletes, mitandrema. (mihomehy) - Eny, azafady. - Ie, heveriko fa lava loatra, lava loatra.
Tena manana an'ity kiraro kiraro ity aho. Nampiasako be dia be tao amin'ny Giro izy ireo ary nihalava izy ireo ary nivelatra sy nivelatra fotsiny, ankehitriny lava loatra izy ireo. - Eny eny. - Eny, eny, marina izany.
Ary lava loatra izany, eny heveriko fa mety ho lava loatra, azo antoka izany. Ka tsy tiako ny mihoatra ny lalàna UCI. Io ihany no fitsipika UCI tiako hajaina - (mihomehy) Ka mandra-pahoviana no lava loatra? - Mandra-pahoviana no lava loatra? Raha mihoatra ny ombilahinao ity dia lava loatra - any isika, tsara sy mora - heveriko fa toy izany koa, ain Raha mijery ny olana hafa amin'ny bisikileta ianao dia heverinay ho vazivazy lehibe izany rehefa mijery ny sasany amin'ireo olana hafa ianao miatrika bisikileta isika.
Saingy heveriko fa tsy maintsy ho toy izany, amin'ny bisikileta ity fomban-drazana mahafinaritra izay tsy maintsy ampinonointsika ity dia mbola toy ny bisikileta toa ny taloha ihany ny bisikileta. Tsy izy ireo, toa tsy hiova fiara Toyota Corolla mankany amin'ny fiara Formula 1 izy ireo. Mbola manana karazana silhouette ifotony amin'ny bisikileta izy ireo ao, ary te hitandrina ny fomba amam-panao bisikileta hatrany izy ireo.
Hitako izany. Tokony ho mora izany, tsy azonao atao ny mamela ny olona hisintona ny tsipika fanombohana ary hisintona ny ba kirarony rehefa avy nandalo ilay takelaka ary avy eo podium. Midika izany fa sahy tsara izany.
Ka mety indulgence kely angamba. Te hilaza aho fa tsara izany, ny fizahana UCI iray manontolo tamin'ny fotoana nanombohany dia nahafinaritra tokoa izao, saingy karazana refy ianao. Hivoaka eo amin'ny bus izahay alohan'ny handrefesana ny elanelana misy eo amin'ny kitrokelintsika sy ny lohalintsika, ary avy eo dia manoritra tsipika kely roa santimetatra eo ambonin'ny afovoany ianao.
toeran'ny paositry ny bisikileta an-tendrombohitra
Ie, eny, norefesiko ny tenako, izany no tsipika. 'Ary hoy izy:' Oh, okay, nanao ny asako ho ahy ianao. 'Mazava ho azy fa tsy nanao izany mihitsy aho. - Mazava ho azy. - Fa eny, izany rehetra izany, vita izany rehetra izany satria manana an'io jig tena mahafinaritra io izy ireo.
Ka ny fomba tokana manodidina azy dia ny manintona ny ba kiraronao aorian'ny fihombohan'ny fanombohana. - Inona no filamatra? Ka lava sock? Moa ve misy? - Ny tiako holazaina dia hoe avo araka izay azo atao ho an'i Aero. Ho an'ny tsipika tan, dia ba kiraro.
Ho an'ny zavatra isan'andro dia ilazako toerana iray santimetatra eo ambanin'ny fanambanin'ny hozatry ny zanak'omby sy ny tampon'ny ba kiraro - Ity izahay. Hafa tanteraka ny endrikao androany, sa tsy izany? Saingy manana slider anao manokana ianao. Raha ny marina dia saro-piaro amin'ireo.- Misy zavatra hafa mampatahotra ahy tokoa, ka raha misy olona tonga amin'ny tsipika fanombohana ka manala ny kiraroko dia tsara izany.- (mihomehy) - Matotra .- Te hahita izany aho.
Misy olona tonga manala ny ba kiraroo - eny - misy zavatra lehibe kokoa eto amin'izao tontolo izao tokony hampanahy. - Azo antoka, azo antoka. Tsy eto amin'izao tontolo izao ihany, fa amin'ny bisikileta koa, dia mety hanahy isika.
Manana zavatra samihafa karakarainay. - Holazaiko fa faharoa amin'ny fitsipiky ny lalàna izay tokony hampiharinao - Lehilahy tsara. Ary inona ny lava sock mety ho anao? - Na inona na inona omen'izy ireo ahy - tiako ity lehilahy ity (mihomehy) - Ampahafantarina ahy tanteraka aho ary mieritreritra fa avela ho eny antenatenany.
Manelanelana ny tongotrao sy ny lohalika --- ny lohalikao? - eo ambonin'ny tamponao. Tsy fantatro. - Ie, na ahoana na ahoana.
Izay eritreretiko, raha ny marina, rehefa ataonao antsasaky ny antsasa-manila ireo dia tsy dia tsara izany. Ka ny halavany tsara indrindra ho an'ny estetika dia mety ho ambany kely ihany, ary avy eo tsy fantatro raha haingana kokoa ny ba kiraro aero. Ary avy amin'izay nolazaina tamiko dia tsy dia misy mahasamihafa azy, ka fantatrao, raha manana fitsipika milaza izy ireo fa tokony ho antsasaky ny lalana dia mety hanana kely kokoa noho izany aho, mba tsy ho adaladala jereo .- Ary ahoana ny androany? Manetsiketsika ny halavany lavorary ve ianao, ny tianao holazaina? - Ie, tsy haiko.
Ie, tsara izy ireo. Manana ny ba kiraro DeFeet izahay. Ka hoy aho hoe: faly be aho amin'izany.
Ary mety ho lava kokoa ho ahy izy ireo, satria fotsiny hoe lava ny tongotro, fa tsy hiteny kosa aho hoe maniry ambony loatra ianao, sa tsy izany? Ba kiraro fotsy toa itony eto Aostralia. Tsy maharesy azy. Te-ho tan-tarehy ve ianao? Tsy mbola.
Tsy nahita masoandro tena izy aho nandritra ny telo volana. Hatramin'izao dia teo an-tanako ihany io. Fanamasoandro be dia be ka angamba ao anatin'ny tapa-bolana rehefa mandeha izahay dia ho volon-koditra. - Ie, tsy zakako ilay resaka mirehitra.
Jereo ny toe-pahasalamako. Eny ary, tapaho. (mihomehy) - Tsy mbola nieritreritra an'izany aho.
Ny tiako holazaina dia mieritreritra amin'ny lafiny sasany aho, mety tsara kokoa noho izay olona mandeha amin'ny fantsona sy zavatra hafa, toy ny ba kiraro amin'ny lohalika. Izay aerodynamika kokoa ara-teknika kokoa, araka ny fahazoako azy, tsy tsara izany rehefa mandeha eny amoron-dranomasina ianao, dia mahatsiravina be izany, tsia, tiako ny ba kiraro avo, ary raha noho ny ba kiraro fotsiny dia tsy raharahako izany. Fa rehefa manandrana manararaotra sy mitaingina ity kitapo famindrana ity ny olona.
Amin'ny lafiny iray, ny lalàna no fitsipika, ary tsy miraharaha izany aho. - Eny ary, misy sock sock mety ho anao? - Eny, mila manao lava be aho, tsy toy ireny kiraro kitrokely ireny. - Tsia. - Tsy mpankafy azy io aho.
Fa eny, karazana toy izany amin'ny ankapobeny ity karazana habe ity. Tsy maintsy alamiko tsara izany. Saingy tsara izany, tsy mampaninona ahy izany.
Eo ambanin'ilay zanak'omby. - Heveriko fa tsara, tsy maintsy lazaiko izany.- Misaotra betsaka anao aho-- Nijoro teo akaikiko izy. Tokony holazaiko izany.- Eny, hiandry ny hahita ilay lahatsoratra aho hahita izay lazainao avy eo (mihomehy ) .- Tsia, mahafinaritra ahy ianao.- Eny, milay ny zava-drehetra.- Ny bandy hafa kosa.- Eny, tsia, tsara izany, fantatro koa izy ireo.- Voalohany indrindra, mieritreritra aho fa misy lalàna hafa angamba hijerena alohan'ny hiahiahy ny halavan'ny sock.
Fa eny, ho ahy dia tsy dia avo loatra aho, tsy dia ambany loatra ny làlambe afovoany lasa ambony indrindra, ny bandy te-hidina ambany dia tsy manelingelina ahy. Tsy dia tsara tarehy izy ireo - Ankehitriny miresaka ba kiraro isika, ianao dia iray tamin'ireo brigade tsy nisy sock tamin'ny Lalao Olaimpika, sa tsy izany? - Nolelaka ny ba kiraritray tokoa izahay nandritra ny taona iray talohan'izay nampihomehy ampy ho an'ireo lalao sy Lalao Olaimpika. Ary avy eo, nahafinaritra fa maro ny ekipa nanomboka tsy nanao ba kiraro, ary rehefa tonga tany amin'ny Lalao Olaimpika izahay dia nitondra ny ba kiraro aero ary mbola nitety fiara tsy nisy ba kiraro izy ireo.
Ka dia lalao kely fotsiny raha ny marina. Saingy tsia, samy nanana ba kiraro aero daholo isika ho an'ireo lalao. Iza no nieritreritra ny ba kiraro mety ho resaka mahaliana toy izany? Andao.
Ny pro dia mieritreritra ny halavan'ny sock. Amin'ny ankapobeny, tsy tokony hatreo amin'ny lohalika izany, ary tsy tokony ho eo amin'ny kitrokelinao izany. Amin'ny toerana iray eo anelanelany.
Ary koa ny UCI dia tokony hijery fitsipika hafa fa tsy iray momba ny halavan'ny sock. Ary toa manaiky ihany aho. Ampahafantaro anay ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany, hoe inona ny halavan'ny sock anao.
mandà dabilio fihodinana rosiana
Tokony mbola hampihatra an'io lalàna io ve ny UCI? Midira ao amin'ity fizarana fanehoan-kevitra ity. Aza adino ny mijery ny fivarotana GCN ao amin'ny shop.globalcyclingnetwork.com.
Ary izao ho an'ny lahatsoratra roa hafa tsy misy dikany, tsindrio fotsiny eto ambany ary eto ambany fotsiny. Ary handeha aho ary hametaka takelaka fanampiny amin'ny masoandro. Ary angamba esory ny ba kiraro.
Inona no mampiavaka ny ba kiraro?
Amin'ny ankapobeny,ba kiraromanana ireto fiasa manaraka ireto:Ba kiraromanify ary mifanakaiky akaiky satriabisikiletakiraro mifanaraka tsara ary tsy afaka mandray tsara, matevina sy milaminaba kiraro.Ba kiraro, toaba kiraroho an'ny ankamaroan'ny hetsika aerobika dia vita amin'ny fitaovam-pandehanana malaky, maina haingana mba hampihenana ny tsy fahazoana aina rehefa manemboka ny tongotrao.
Fa maninona no manao ba kiraro lava ny pro bisikileta?
Ka ny ankamaroan'ny lalanamitafy ba kiraro lava ny bisikiletana satria tena manampy azy ireo izany (rehefa nyba kirarodia aerodynamika) na mba hijery matihanina.Ba kiraro lavadia afaka misoroka ny hatsembohana izay mihazakazaka amin'ny tongotrao tsy hanatratra ny kitrokelinao sy ny tongotrao ary hisorohana ireo vatokely tsy hiditra ao aminaoba kiraro.13 Okt 2020
Fa maninona ny mpitaingina bisikilety no manintona ny ba kiriny?
Ankoatry ny fihenan'ny teboka fanerena, ny natiora maneritery dia mitondra tombony ihany koa amin'ny fiantohana ny soja voatazona mandritra ny fotoananymitaingina ary afaka mampiroborobo ny rà mandriaka mankanynytendrony, mampihena ny fivontosana izay mitranga voajanahary mandritra ny fanatanjahan-tena.17 Mey 2017
Tokony hanao ba kiraro fanerena mandritra ny bisikileta ve ianao?
Kaody famatrarana bisikileta, toy ny CEPba kiraro, fanampiana amin'ny fanesorana asidra laktika rehefa mihalehibe izynandritrahetsika mavesatra. Fanomezanaba kiraro famatraranaaorian'ny fampiofanana dia manampy ny hozatrao ho sitrana ihany koa. Rehefa avy mitaingina mafy ianao dia mitazona nyba kirarony on dia hanampy amin'ny fampihenana ny fanaintainan'ny hozatra, ny fihazonana ny tsiranoka ary ny fivontosana.16 feb 2018
fanatanjahan-tena tsy tapaka
Impiry aho no tokony hisasa pataloha bisikileta?
ahosasao madionykilaotyary fonon-tanana isaky ny 100 mi na mihoatra izay matetika amin'ny indray mandeha isan-kerinandro. Raha toa aho kaAzamitaingina lava kokoa azon'izy ireovoasasaBebe kokoamatetika. Tsy mbola nanana olana tamin'ny fanaovana an'io aho (taorian'ny efa-polo taona teo ho eobisikileta).12 Okt 2011
Fa maninona ny bisikileta no manaratra ny tongony?
Iray amin'ireo antony lehibe mahatonga ny matihaninabisikileta manaratra ny tongonydia ny manaonyfanorana matetika aorian'ny fitaterana dia mahazo aina kokoa. Antony iray hafaniharatradia ny fitsaboana ny aretin-dàlana na ny ratra hafa aorian'ny fianjerany dia mora kokoa raha tsy misy ny volo ao an-dàlana. Ny fehikibo dia azo apetaka mivantana amin'ny hoditra.10 apr 2019
Fa maninona no manao ba kiraro lava ireo bisikileta an-tendrombohitra?
Manao ba kiraro lava ny bisikileta an-tendrombohitrasatria izy ireo dia miaro amin'ny tondro, ivy misy poizina, kirihitra ambany sy rantsana. Sakanany tsy hiditra ny fasika sy vatokelyba kiraro, sorohy ny hatsembohana hiditra amin'ny kiraro. ary miaro amin'ny fitokonana ny pedal.
Moa ve i Nike manao ba kiraro famoretana?
nyNikeElite Nahazo diplaomafamatraranaOTC Mihazakazakaba kiraromanolotra fanampiana amin'ny alàlan'ny omby efa antitra sy efa mandrosofamatraranateknolojia. Ny lamba lamba sy hatsembohana amin'ny hatsembohana dia manome rivotra sy fampiononana azo antoka.
Tokony hosasanako ve ny bisikiletako bisikileta isaky ny mandeha?
Isaky ny mandeha. Ianao dia afakasasao madioamin'ny rano mangatsiaka misy detergent misy rano, ara-dalànatsingerin'nymiaraka amin'ny sisa amin'nysasao madio. Raha paranoida ianao dia afaka mampiasa ilay malefakatsingerin'ny. Avy eo mianjera maina, tsy misy hafanana.12 Jona. 2010 r.
Azonao atao ve ny manao bisikileta bisikileta indroa?
Ny hevitra manasa tendrombohitra antsingerin'nyfitaovana mety hanome aingam-panahyianareonyanaovan'ireomitovybibikely fohy indroa, na angamba intelo (!!!) aza misesy. Aza manao fotsiny. Maina vetivety izy ireo, matetika tsy misy fofona, aryRAHAnykilaotymainty, itafakatoa tsy nitafy mihitsy ry zareo.2 feb 2018
Karazana ba kiraro inona no ampiasaina amin'ny bisikileta?
Ny tsena ho an'ny ba kiraro bisikileta dia tsy mitsaha-mitombo, miaraka amin'ny ba kiraro avo lenta izay manome famatrarana, fananganana fibre karbonika ary tombontsoa aero, ho an'ireo izay mamadika ny saturation hatramin'ny 11.
Karazan-kiraro inona no vita amin'ny sockguy?
Ny ba kiraro SockGuy dia manome fampisehoana mahatalanjona miaraka amin'ny toetra, fiononana ary fomba. Multi-Sport, kilasika, mahatsikaiky, lehilahy, vehivavy, fanao, bisikileta, hazakazaka, fitsangantsangana +
Fa maninona no apetrakao amin'ny ba kiraro bisikileta i elastane?
Raha izany dia ampiasaina hanomezana hery ny akora mifangaro. Elastane, fantatra ihany koa amin'ny hoe Lycra sy Spandex, dia mametraka ny fatra ao anaty kiraronao. Izy io dia miaina fofonaina sy mando hamandoana be indrindra, saingy manampy indrindra ny fanampiana ny ba kiraronao hijanona tsara sy hitazomana ny endrik'izy ireo aorian'ny fanasana maro.